Karolinska oo qaliin ku sameeyay haweenay hore loo soo guday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Karolinska oo qaliin ku sameeyay haweenay hore loo soo gudayFoto: Leif R Jansson/TT.
Karolinska oo qaliin ku sameeyay haweenay hore loo soo guday
Kintirka oo dib loo soo nooleeyneyo
La daabacay onsdag 21 januari 2015 kl 10.00
Cisbitaalka jaamacadda Karolinska ayaa noqday cisbitaalkii ugu horreeyay ee ku yaalla waddamada Iskaandaneefiyanka ee qaliin ku sameeya haweenay hore loo soo guday, iyada oo dib loogu soo nooleeyn kintirka oo hore looga gooyay.
Sida uu sheegay Hannes Sigurjonsson oo ah dhakhtar daraasaddan ku soo bartay magaalada Amsterdam, waxa uu hannaankani noqonayaa mid haweenka la guday dib ugu soo noolaynaya kintirkii. Daraasaddani waxa ay leedahay xanuun yar, laakiinse waa hab wanaagsan oo dib loogu soo noolaynayo kintirka oohoray looga gooyay, taasi oo sahlaysa in qofka dumarka ahi dareento in ay u dhan yihiin xubnaheedii.
Hannaankan dib loogu soo noolaynayo kintirka oo horay looga gooyo dumarka marka gudniinka lagu sameeyo, waxa dhawr sanno ka hor laga hirgeliyay dalka Faransiiska, halkaasi oo qaliin lagu sameeyay 5000 oo dumar ah oo hore loo soo guday. Waxaanay taasi dhashay natiijo wanaagsan. 98% ka mid ah dumarkii qaliinka lagu sameeyay waxa ka yaraaday xanuunkii uu dhaxalsiiyay gudniinku, waxaanay heleen awood ay dib ugu soo nooleeyaan kintirkii horay dhaawaca loogu gaystay. Inkasta oo habka dumarka loo gudaa kala duwan yahay, haddana sida uu sheegay dhakhtar Hannes Sigurjonsson marka kintirka dumarka afka hore laga jiro, waxa hoos baaqi ku noqda qaybteeda kale, taasi oo sahlaysa in dib loo soo nooleeyo, korna loo soo qaado.
- Marka dumarka la gudayo, xubinta kintirka lama wada jaro. Waa xubin dheer, oo afka hore uun baa laga gooyaa, waxaanay is haysataa oo ay isku qarisaa ilaa gunta hoose.
Wali ma cadda sida ay Iswiidhan u xiisayn doonto hannaanka cusub ee lagu caawinayo dumar badan oo hore loo soo guday, waxa se ilaa hadda suurogalay hal qaliin oo guulaystay, halka ay iyaguna diiwaanka ku jiraan saddex dumar ah oo kale, kuwaasi oo doonaya in iyana lagu sameeyo qaliin lagu soo noolaynayo xubintii horay looga gooyay. Kharda Seerar waxa ay ka mid tahay haweenka hore loo soo guday, inkasta oo ayna wax dhibaato ah ku qabin gudniinkii loo gaystay, haddanna waxa ay taqaanaa dumar dhawr ah oo doonaya in lagu sameeyo qaliin lagu soo noolaynayo kintirkiihore looga gooyay markii la gudayay.
- Marka aniga iyo gabdhaha aanu saaxiibka nahay wada fadhinno ee aanu wada sheekaysanayno rajo fiican baanu ka muujinaa arrintan. Waxa aan aqaanaa haween badan oo diyaar ah. Kuwaasi oo raba in ay dhakhtarka la kulmaan, si baadhitaan loogu sameeyo ayna u helaan fursad dib loogu soo noolaynayo kintirkii horay looga gooyay.
Khadra ayaa sheegtay in ay arrintan u aragto fursad weyn oo ay dumarku heleen, taasi oo muujinaysa in bulshadu gacan dumarka ku siinayso in ay dib ugu helaan kintirkii hore looga gooyay.
- Waa hannaan cusub oo aynu dib u dhisayno, una soo celinayso kintirka hore looga gooyay dumarka. Waa taas ta aynu diirrada saaraynaa, si aynu u soo celino dareenkii awoodeed.
Hannaankan cusub ee dib loo soo noolaynayo kintirka hore looga gooyay dumarkii la guday, waxa hore looga hirgaliyay dalka Faransiiska, halkaasi oo 3000 dumar ah baadhitaan lagu sameeyay sannadkii 2012. Waxa sidoo kale hannaankani ka shaqeeyaa waddamada Faransiiska, Jarmalka, Holand iyo waliba waddanka Iswiisarlaan.